चैत्र बैक तथा फाईनान्स मर्जरले लाईसेन्स संकटमा
मर्जर अथवा प्राप्तीको सोझो अर्थ हो । दुई वटा दुई वटा भन्दा बढी समान प्रकृतिका संस्थाहरु गाभिएर वा एउटा संस्थामा अर्को संस्था बिलय भएर एउटा बलियो संस्थाकोरुपमा कारोबार गर्नु हो । राष्ट्र बैैंकले यही उद्ेश्य बोकेर नै झण्डै १० बर्ष अघि मर्जर तथा प्राप्ती सम्वन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
रेमिटेन्स कम्पनीको आवरणमा हुण्डीको कारोवार
काठमाडौको ओमबहालबाट गत कात्र्तिकमा तीन जना हुण्डी कारोवारी पक्राउ परेको छ । एक करोड रुपैयाँ रकम सहित तीन जना संकास्पद हुण्डी कारोवारीहरुहरुलाई केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) पक्राउ गरे । सिआईबीका अनुसुार हुण्डी कारोवारमा संलग्न भएको अभियोगमा झापा घर भई हाल काठमाडौको ताहाचल बस्ने ३१ बर्षिय बिकास मित्तल, झापा नै घर भई हाल काठमाडौ बस्दै आएका २७ बर्षिय कमल मित्तल र पर्वतको कुश्मा घर भई हाल काठमाडौ बस्दै आएका ३२ बर्षिय गणेश पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो
बिस्तारै सम्हाल्दैं शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु
सिंगो मुलुकको आर्थिक बिकास र समृद्धिको पहिलो शर्त शिक्षा हो । शिक्षा बलियो हुनको लागि शिक्षाको जग बलियो हुनुपर्छ । शिक्षाको जग बलियो भयो भने शिक्षा बलियो हुन्छ ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमालेका कारण आगामी मंसिर अगाडि नै संसदीय निर्वाचनमा जाने अवस्था आउन सक्ने उद्घोष गरेकाछन । नेता थापाले भने, एमालेले संसद अवरोध गरिरहने र संवादका लागि नआउने हो भने आगामी मंसिर अगाडि नै संसदीय निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
» चैत्र बैक तथा फाईनान्स मर्जरले लाईसेन्स संकटमा
» प्रविधिसंगै पूर्वाधार निर्माण गरी प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ, महानिरीक्षक क्षेत्री
» इजरायलमा श्रमिक पठाउन सुरु, श्रममन्त्री श्रेष्ठद्वारा बिदाइ
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा लेगस्पिनर सन्दीप लामिछाने २०२१ ओडिआई क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका विश्वका स्टार बलरलाई पछि पारेका छन् । सन्दीपले २०२१ ओडिआईमा सर्वाधिक विकेट लिने
» विश्वकप : अब ८ टोली बाँकी, सेमिफाइनलका लागि को–को भिड्दै ?
» के संख्या घट्नु नै मर्जरको सफलता हो ?
» एमालेले संसद अवरोध गरिरह्यो भने मंसिर अगाडि नै संसदीय चुनाव हुन्छ
» हुण्डी मार्फत हुने नगद कारोबार अन्त्य होस